700ml 1000ml Girazi Doro Bottle Suppliers
Yedu iyi 1 litre yakajairwa mabhodhoro edoro anopedzwa necork. Kune akasiyana chimiro uye akasiyana zvinhu cork mufekitori yedu, saizi yayo, iyo isingawanzo bhodhoro yekumisa zvinhu zvese zvinogona zvinoenderana nezvaunoda.
Yedu iyi 1 litre yakajairwa mabhodhoro edoro anopedzwa necork. Kune akasiyana chimiro uye akasiyana zvinhu cork mufekitori yedu, saizi yayo, iyo isingawanzo bhodhoro yekumisa zvinhu zvese zvinogona zvinoenderana nezvaunoda. Kana iwe uchida chisikwa chehuni, tinogona kupa cork yemapuranga. Kana iwe uchida polymer cork, tinogona kuzvitumira kwauri. Hazvina mhosva kuti chii chaunoda, isu tinogonawo kukupa kwauri.
Isu tinokwanisa kuita zvakadzika kugadzirisa pane izvi Zvisina kujairika Girazi Mabhodhoro. Zvakadai sechando, decal, sirika kudhinda, kupenda, uye kumwe kudzika kugadzirisa. Kana uchida, tinogona kuita chero ruvara, chero logo pamabhodhoro egirazi.Kana iwe uchida kugadzira mabhodhoro egirazi akaumbwa, tinogonawo kugamuchira mirairo yeOEM. Ingotiudza zvaunoda uye isu tinogona kuronga kuti vagadziri vedu vagadzire.
Kukanganisa pamuromo wegirazi mabhodhoro uye zvikonzero zvavo uye mhinduro: Muromo webhodhoro hauna kutenderera (muromo wakafuratira). Muromo webhodhoro wakatsetseka kana kuremara. Tembiricha yekudonha yakanyanya. Kusakwana backblowing kana nguva pfupi yakawandisa. Nguva yekuonana ipfupi kana nguva yekukwesha ipfupi. Mouth mold yakanyanya kupisa, kutonhorera kwebhodhoro mumuromo hakuna kunaka. Iyo dhayamita ye pliers yakanyanya kudiki kana pakati pe pliers haina kuenderana. Musoro wekuvhuvhuta wakanyanya kudzvanywa kana kuti positive blow pressure yakanyanya. Muromo mudiki (maziso madiki, muromo nhete). Inoreva dhayamita diki yemuromo webhodhoro. Tembiricha yekudonha yakakwira zvakanyanya uye chimiro chemusoro chakapinza. Core yekubata nguva negirazi zvinhu yakarebesa, tembiricha yepakati haina kukodzera. Core yakasviba zvakanyanya, jekiseni rekutanga reforoma rakakurisa. Iyo yekumusana yakabatidzwa too late. Core dhizaini haina musoro. Kusashandiswa zvakanaka kwemhepo inotonhorera kwekutanga kufa uye muromo unofa. Positive blow pressure yakaderera. Iyo dhayamita yemukati yebhodhoro clamp idiki zvakanyanya.
Zvakapfuura: 330ml 750ml vakadzi vanogadzira bhodhoro regirazi
Zvinotevera: 750ml Swing Pamusoro Bhodhoro (Pasina Stopper)
500ml Mabhodhoro eMweya
Frosted Spirits Bhodhoro
Girazi Mweya Bhodhoro 700ml
Mweya Bhodhoro 700ml
Mweya Mabhodhoro 500ml
Mweya Glass Bhodhoro
700ml Girazi Mabhodhoro Wholesale
China Factory 750ml Empty Pachena Amber Brown Bor...
700ml Bvisa brandy Girazi bhodhoro